Dowlada Iceland oo sharciga u diiday Mahad Abib oo dib ugu celisay Norway… – Hagaag.com
Dowlada Iceland oo sharciga u diiday Mahad Abib oo dib ugu celisay Norway…
Posted on 4 Seteembar 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Mahad Abib Mahamud ayaa dib loogu soo celiyay dalka Norway kadib markii diidmo sharci ay siisay dowladda Iceland oo uu ku dhowaad sannad ka hor weydiistay magangalyo.
Muwaadinkan soomaaliyeed ayay dowladda Norway sharciga kala laabatay kadib 17 sano oo uu dalka Norway ku noolaa, waxaana sharci kala laabashadiisa loo cuskaday ka been sheegid dalka uu asal ahaan kasoo jeedo, iyadoona dowladda Norway ay ku andocooneyso in Mahad uu kasoo jeedo dalka Jabuuti.
Mahad ayaa warbaahinta TV2 ee dalka Norway horay ugu sheegay in diidmada sharciga Iceland loogu cuskaday heshiiskii qoxootiga ee lagu gaaray magaalada Dublin kaas oo dhigaya in ruuxa magangalyo doonka ah uu xaq ku leeyahay dalka uu marka ugu horreysa iska dhiibo.
Waxa uu Mahad sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in uu dib ugu soo laabto dalka Norway, uuna iminka bilaabi doono raadsashada xuquuqdiisa sida sharciga iyo noloshiisa.
15 bisha Oktobar ayuu u ballansan yahay maxkamad taas oo khuseysa dib ula soo laabashada sharcigiisa.